Isdiiwaan gali si aad ula socoto mac luumaadka ku saabsan gargaarka WA ugu talagashay shaqaalaha - Action Network
HALKAAN KALA SOCO WARARKA UGU DHANBEEYA EE KU SAABSAN WA GARGAARKA MAALGALINTA SHAQAALAHA
Qof ahaan waxaan xiisaynayaa: Inaan helo codsi gargaar dhaqaale Inaan caawiyo tabaruc maamul gargaarka Inaan laxiriiro dadka imatala si aan u caawiyo ololehan In aan qoraal kabixiyo si aan u caawiyo ololeha beelaha wararka In aan noqdo af-hayeen iyo in aan gargaarka iyo ololeha aan warbaahiyada kala hadlo Waxaan awoodaa inaan tabaruc ama lacag aan siiyo ololeha
Urur ama hay’ad wakiil ahaan, waxaan xiisaynayaa: In aan caawiyo bulshada aan lashaqeeyo ee macaamilka ii ah kana caawiyo say u codsan lahaayeen gargaarka dhaqaalaha inaan qoraal kabixiyo si aan u caawiyo ololeha beelaha bulshada wararka kadhageeysatan In aan noqdo af-hayeen iyo in aan gargaarka iyo ololeha aan warbaahiyada kala hadlo Waxaan awoodaa inaan tabaruc ama lacag aan siiyo ololeha Inaan ka qaybgalo shirarka looga doodaayo labadii asbuucba mar.
Isdiiwaan gali si aad ula socoto mac luumaadka ku saabsan gargaarka WA ugu talagashay shaqaalaha
Gargaarka lagu caawinaayo dadka shaqaalaha ah ee WA
Si loogu gargaaro oo wax laagu qabto dadka qoxootiga ah oo gobolka Washington ka shaqeeya ee aan sharciga lahaayn, ee cudurka cusub ee Covid-19 uu siyaabo kala duwan u saameeyey ayaa waxaa iskutagay oo is baheystay gooxo badan si ficil dagdag ah looga codsodo Gudoomiyaha Gobolka Jay Inslee, Wakiilka sare Andy Billig, iyo Af-hayeenka Guriga wakiilada Laurie Jinkins.
Cudurka COVID 19 oo na wada saameeyay anagoo dhan laakinse waxaa uu sigaar ah u sameyay dadka aan sharciga haysan iyo qoysaskooda danyarta ah oo aan wax kal]aalina aan laga siinin dhaqaalaha loogu talagalay in bulshada lagu caawiyo ee $2 trillion ka ahaa ee ay golaha madaxdu ansixiyeen bilihii lasoo dhaafay. Iyadoo la isku raacsan yahay inay muhiimtahay in loo gargaaro dadka shaqaalaha ah damaan oo laga caawiyo xaga dhaqaalah si loo soo afjaro cudurkan bulshada soo wajahay.
In ka badan 250,000 oo ah dadka aan shariciga laheyn ayaa Washington ugu waca dagaankooda.
Dadkaas oo qeyb weyn ka ah qoysaska iyo bulshada oo wax tarkuleh gobolkaan, waxayna mudanyihiin xushmad iyo Sharaf biliaadnimo, iyaga oon lagu fogaynayn sharci la aantooda darteed. Waxaa khasab nagu ah in aan aqoonsano bulshada shaqaalaha ah ee sharciga laheyn in aay bixiyeen dhaqaale gaaraya ilaa $316 malyan oo ah cashuurta gobolka iyo magaalada hoose.
Ololaha shaqaale gargaarka ee gobalka WA ayaa codsosho soo dhiibtay ay ka midyihiin:
1. In Xafiiska gudoomiyuhu uu sameeyo lana meeldigo dhaqaale garaaya $100 miliyan oo lagu caawinaayo dadka shaqaaleha ah. Malgalintaas oo ay maamulidoonan hay’adaha bulshada u shaqeeya kuwaasoo siindoona kaalmo dhaqaale dagdag ah oo wax loogu qabandoono dadka qaxootiga ah ee sharciga la aanta ah oo dagan magaalada washington,
2. In la sameeyo nidaam lagu caawinaayo dadka shaqadii ka go day isla markaasna laga saaray helida caymiska shaqo la aanta, oo ay ka mid yihiin qaxootiga aan sharciga lahayn, nidaamkaas oo lagu daro sidii bulshadaas loo siin lahaa mushaar-badal.
Bisha afraad 20keedii kooxda isbahaysigayaga waxay abaabushay iskuna keentay dadbadan oo ka kala socda 430 hayadood iskuna imaaday siday gacan u siinlahaayeen una abuurilahaayeen ficilo badan oo lagu abaabulo korrna loogu qaado codadka dadka si toos ah dhibaatadan u saameeysay.
Dadkaas oo isugu jiray dadka qaxootiga oo aan sharciga lahayn, dad madhowga ah, queer, dad usu oqoonsan in ay dumar yihiin, hogaamiyayaasha diinta iyo dadkaloo nala jira baa ficilka ku soo biiray iyaga oo hogaaminaya olole bulshadu ay horseeday oo kula xisaabtamayso in ay ficil dagdah qaadaan hogaaminayaasheena.
Guul si adag loogusoo dagaalamay si wax loogu qabto bulshada qaxootiga ah oo sharci wadanka ku lahayn, gobolka Washington oo ugu dhanbayntii ku dhaqaaqay in uu bixiyo COVID-19 gargaar.
Asbuucaan gudoomiyah Inslee xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay inay codsi qorshe u dirayaan hayadaha dadka u adeega si ay u qaabilaan maalgalinta luugu talagalay gar gaarga bulshada. Hayadaas marka ay aqbalaan maalkaas ayaa waxaa laga rabaa inay isku xilsaraan oo lakulmaan dadka madaxda u ah bulshada danyarta ah ee baahida badan soo wa jahday si loo gaarsiiyo caawint dhaqaaleed.
Waxaa kooxda isbahaysigu u dabaal dhagaayaan dhaqaala ah $40 milyan oo lagu caawinaayo bulshada danyarta ah, lakiin dadaalku iyo shaqadu wali ma dhamaan oo waxaa wali loo baahanyaha dhaqaalo farabadan si bulshada bahida xaga dhaqaalaha looga caawiyo.
Kooxda isbahaysiga waxay ka codsanayaan Gudoomiyaha, sharci dajiyaha, iyo deeq bixiyayaasha gaarka ah iyo maalgaliyeyaashuba in ay u jawaabaan bulshada baahideeda dhaqaale, si loo buuxiyo isdhinka xaga dhaqaale ee soo wajahay bulshada oo ay u sameeyaan nidaam shaqo’la aan oo joogta ah gobolka dhan.
Halkaan iska diwaangali si luguula soo socodsiiyo gargaarka tilaabooyinka kasoo bixidoona iyo foomamka lagu sii wadayo ficilka. Waxaan u baahan nahay qof walba taageerkiisa.
Fadlan dhinaca midigta ah ee qoraalka loogu talagalay macluumaadkaga ku qor:
Magaca awoowkaa ama magaca dambe
Nambarka Zip/Postal Code
Hadii hay’ad ama urur aad matalayso, fadlan magacooda ku qor meesha qoraalka loogu talagalay ee ugu dhanbaysa.
(Kudhufo meesha qoraalka loogu talagalay ee ugu dhanbaysa oo ka hoosaysa “Organization” kana saraysa badhanka cas) si aad u dooroto sidaad ula socoto fariimaha ka soobaxaaya WA Immigrant Solidarity Network (WAISN) ay fartiimo mobiilka kugu soo diraan. Ogow ina aay lasocoto sicir fartiin iyo macluumaadba. Hadii aadan rabina Kujawaab STOP (JOOJI) si aad isaga saarto.
Ugu danbayntii, kudhufo badhanka cas (“ADD YOUR NAME”) oo dhinaca midigta ku yaal si aad u dhamaystirtid ama u gudbiso macluumaadkaaga.
*Ogaysiis: Waxaa jiridoona hab isqorid oo gaar ah si loo dalbado maalgalin, lakiin foomamkii lagu codsanlahaa wali ma furmin.